China pepa insole bhodhi Kugadzira uye Fekitori | Wode
pepa insole bhodhi
Saizi: Kazhinji 1.00mx 1.50m kana zvinoenderana nechikumbiro chevatengi
Unhu: 555,001,517,608, mhando dzakasiyana dzesarudzo
Kurema: Zvinoenderana nemhando uye saizi, pls taura nesu ruzivo
Kurongedza: 25 machira pabhegi
Hapana deformation ichaitika nekuda kweye thermal typeset kana imwe yakanyanya tembiricha mashandiro, inokodzera yemazuva ano kumhanya otomatiki shangu-yekugadzira indasitiri.
Manly yakashandiswa Kesi uye bhegi maindasitiri anonamira bhegi nesutukesi.
Yakapetwa mu roll fomu, roll size inowanzo kuve 36 "x50m kana 36" x100m uye dhayamita yayo iri kutenderera 27cm. Strong PE yakajeka epurasitiki mabhegi anoshandiswa kurongedza mupumburu. Yakarukwa bhegi inowanikwa kana zvichidikanwa.
1.High mhando nemitengo inonzwisisika.
2.We tinoteerera kune yega yega diki diki kubva kune yakasvibirira marara mutsauko kutonga, kusvika pakuendesa uye mushure mekutengesa sevhisi.
3.Yakavakirwa silencer mhete, inogona kudzikamisa ruzha kana uchidhonza maketeni, maketeni ari mushe.
1.We tiri fekitori inoisa kuyedza kwese kutsvagisa, kugadzira, kutengesa uye sevhisi kune vatengi vedu.
2.Takapedza mushure-kutengesa nzira yekutevera kuti tiwane mhinduro kubva mukushandiswa kwevatengi.
3.Directly kuendesa neyekutanga ruoko fekitori mutengo uye yakanaka mhando vimbiso kune vatengi.
4.Our makuru shangu zvinhu misika iEurope, Middle East, South America, Southeast Asia nedzimwe nzvimbo.
1.Ndingaite sei kuziva ruzivo rwezvigadzirwa zvako?
A: Kune nzira dzakawanda: chengeta kunetsekana webhusaiti yedu, zvakare tinogona kutumira yedu yechirungu vhezheni yechigadzirwa bhurocha kwauri. Uye zvimwe isu tichatora chikamu muCanton Fair kana imwe yekunze yakanaka. Saka iwe unogona zvakare kushanyira dumba redu. Ndatenda. Kune mimwe mibvunzo pls nemutsa siya meseji muwebhusaiti yedu kana kuti tibate isu zvakananga!
2.Q: Maitiro ekuisa odha newe?
A5: Imwe nzira ndeyekuti iwe unogona kuti titumire yako yekutenga madhairekisheni neemail kana Fax, ipapo tinogona kuita proforma invoice yako, wobva wabhadhara dhipoziti kwatiri, tobva taronga zvigadzirwa zvako. Imwe nzira ndeyekuti iwe unogona kuisa odha online zvakananga, izvo zvinogona kukupa yako inishuwarenzi vimbiso kwauri, zvakanyanya kuchengetedzeka, sezvo paine wechitatu munhu kupa garandi yako kuona kuti iwe unogona kuwana chako chikumbiro zvigadzirwa.
3.Tinogona here kuva neyedu Logo kana zita rekambani kudhindwa pane zvigadzirwa zvako kana pasuru?
A: Chokwadi.Rako Rako rinogona kuiswa pane zvigadzirwa zvako neHot Stamping, Kudhinda, Embossing, UV Kuchengeta, Silk-screen Printing kana Sticker.
Pashure: Shangu Insole Shank Bhodhi
Zvadaro: Pepa Insole Bhodhi yeInsole
1.75mm Pepa Insole Bhodhi YeBhutsu
2.0mm Pepa Insole Bhodhi YeBhutsu
Insole Pepa Bhodhi YeShangu
Insole Mapepa ebhodhi
Pepa Bhodhi Insole
Pepa Insole Bhodhi NaEva
Shangu Insole Chinyorwa Pepa Bhodhi YeBhutsu
Pepa Insole Bhodhi yeInsole
Shangu Insole Chinyorwa Sheet, Tsono Punch Nonwoven Mucheka, Yakasarudzika Mucheka Laminated Na Eva Foam, Pepa Insole Bhodhi NaEva, Isina kurukwa Mucheka NaEva, Insole Bhodhi NaEva,